रविन बज्राचार्य चुनावमा किन ? - Texas Nepal News - Texas Nepal News
रविन बज्राचार्य चुनावमा किन ?
२१ बैशाख २०७८, मंगलवार ११:२३
‘रोटी चिल्लो मीठो, कुरा खस्रो मीठो’ भनेझैं तितो सत्य बोल्ने उनी NRNA भनेपछि हुरुक्क हुन्छन् । NRN को Right Agenda र कार्यक्रम भनेपछि अमेरिकाको जुनसुकै राज्यमा पुग्न उनलाई साइत चाहिंदैन । नेपाल त उनको पानी पॅंधेरो नै भयो । NRN को लागि संसारको कुनै कुनामा पुग्न उनी हिच्किचाउॅदैन । समय मिलाएर पुगिहाल्छन् ।
NRNA को चुनावमा सबैभन्दा बढी पटक हार्ने पनि उनी नै हुन् । सायद उनी सत्य बोल्छन् । सोझो औंलाले हर्पेको घिउ आउॅदैन भन्ने थाहा छैन । ललितपुरको सोझो नेवार न पर्यो । गुटबन्दी कुन चराको नाम हो उनी अनविज्ञ छन् । क्यास तिरेर किनेको भोटमा उनी विश्वास गर्दैनन् । कहिले के, कहिले कुन पदमा उमेदवारी दिइरहेका हुन्छन् । तर आजको दिनसम्म रविन पासाले जितेको अभिलेख छैन ।
उनी सबैलाई आवश्यकता भन्दा बढी विश्वास गर्छन् । आफू खस्रा मीठा कुरा गर्ने तर अगिल्तिर पर्ने मनुवाका चिल्ला कुरामा उनी चिप्लिन्छन् । अनि रविन पासालाई नजिककै, आफनै भनाउॅदा मित्रहरुले लासा यानेकि थाड०ना बनाइ दिन्छन् । तर उनी हार मान्दैनन् र प्रत्येक २ वर्षमा हुने NRNA को चुनावमा नाम लेखाउन आइ पुग्छन् । मानौं लिगलिग कोटमा घले राजा छान्ने दौड प्रतियोगिता भइरहेछ । बफरा रविन पासालाई दौडमा सोझा, भुसतिख्रे घलेहरु मात्र होइन, धूर्त द्रव्य शाहहरु पनि हुन्छन् भन्ने हेक्का छैन । र त हरेक पटकको चुनावमा जित होइन; हारको माला पहिरिन्छन् र अर्को चुनाव पर्खन्छन् ।
रविन पासा पदकै पछि कुद्ने पदलोलुप पनि होइनन् । NRN का विधानका कुरा होस्; महिला वा युवाका सवालमै किन नहुन् ! नेपालमा संविधान बन्दा वा संशोधन हुँदै गर्दा गैर आवासीय अझ अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुको दोहोरो नागरिता, नेपालका सम्पत्ति आदिको मुद्दामा उनी सँधै मोर्चाको अग्रपंक्तिमा हुन्छन् । यसका लागि आफ्ना दैनन्दिनका काम कारबाहीलाई थान्को लाएर नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिलाई भेटेर टेबल टक गरेर कुरा राख्छन् । गैर आवासीय नेपालीका लागि मरिहत्ते गर्ने यस्ता भला मानुषलाई चुनावमा छड्के लगाएर हराइन्छ किन ? त्यो नेपथ्यका अदृश्य कुपात्र को होला ? भनेर उनले चुनाव परिणाम आएको दिन घोत्लिएर माथापिच्छा गरेको हुनुपर्छ ।
उनी चुनाव प्रचार ताका जहॅा जान्छन्, उनी सभामा छाउॅछन्- बोलेर, हॅसाएर अनि प्रष्ट वक्ता भएर । उनको यो फरक शैली देखेर, सुनेर सभामा हॅासोको अट्टहास गुन्जन्छ त कहिले सबैको कान ठाडो हुने गर्छ । किनकि विषयको वास्तविक गहिराइ, समस्या र समाधानका उपायहरु उनी पस्किरहेका हुन्छन् । बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिंड भनेझैं कोही उनलाई हॅासोमा उडाइदिन्छन् । फेरि चुनावमा उनी हार्छन् । तर उनी आगे चुनावमा टुप्लुक्क आइपुग्छन् । रविन पासा बार बार आउॅछन्, माइकमा भट्याउॅछन्, जान्छन्, थाक्दैनन् । पुन: झुल्किन्छन् ।
रविन बज्राचार्यलाई NRN को यति धेरै माया किन लाग्छ ? हरेक चुनावमा हारेर, आफ्नै ठानेकाको लात सहेर फेरि किन सबैकोमा, सबैतिर किन पुगिरहन्छन् ? के यसमा उनको व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको छ ? यदि होइन भने रविनलाई किन मोहोरा बनाएर खेल खेलिन्छ ? हुन त उनले अहिलेसम्म हिम्मत हारेका छैनन् र विश्राम लिने सोचेका नि छैनन् । उनी स्वयंले हार नमान्दा सम्म त ठीकै छ । NRN को जीत नै हुनेछ । तर उनले NRN को लत्तो छाडेको दिन उप्रान्त भने रविन पासालाई सबैले सॅधैं सम्झने छन् । किनकि उनी पटक पटक हारे पनि उनले उठान गरेका मुद्दाले सॅधै जितेका छन् ।
अमेरिकाका उम्मेदवारहरुलाई कोभिड प्रभावीत नेपालीको सहयोगमा जुट्न अध्यक्षका उम्मेदवार कृष्ण लामिछानेको आह्वान
नेपालमा थप २ हजार ४४५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि